I-E309L-16 yicarbon esezantsi-esezantsi ye-Cr23Ni13 i-electrode yentsimbi engenanto esetyenziswa kuhlobo loxinzelelo lwezixhobo ze-rutile. Umnqamlezo - ngqo, unokusetyenziselwa yonke indawo-iwelding. Isinyithi esidipozithiweyo sinomxholo wekhabhoni esezantsi, ke iyakwazi ukumelana nokubola kwekristall okubangelwa yimvula ye-carbide xa isiqinisi esifana ne-niobium kunye ne-titanium singekho.
1. Phambi kwentsimbi, i-electrode iya kubhakwa ngo-320-350 ℃ ngeyure enye kwaye isetyenziswe xa kufuneka njalo.
2. Susa umhlwa, igrisi, ukufuma kunye nezinye izinto ezingcolileyo ngaphambi kokudibanisa.
3. Kucetyiswa unikezelo lwamandla lwe-Dc, kuba ubunzulu be-welding yangoku bunqabile, i-current ayifanelanga ukuba inkulu kakhulu, ukuthintela ukuba bomvu kunye nokuqhekeka kolusu.
4. Nciphisa igalelo lobushushu kangangoko kunokwenzeka, kwaye iswitch amplitude ye-electrode akufuneki ukuba ibe nkulu kakhulu.
5. Preheat kwaye ugcine iqondo lobushushu phakathi kwamajelo angaphantsi kwe-150 ℃.
UKWENZIWA KWEKHEMIKHALI YAYO YONKE IMITHI YOKUTSHINTSHA I-Welding:
I-12.0 ~ 14.0
IINKCUKACHA ZOMatshini ZOKWENZEKA KONKE
Izinto Rm (MPA) / (%)
Iimfuneko 10510 25
Iziphumo eziqhelekileyo 560 42
IINKQUBO ZOKUSEBENZA NGOKUQHELEKILEYO: (AC okanye DC +)
Siyayixhasa i-OEM / i-ODM kwaye singenza into yokupakisha kuyilo lwakho, nceda unxibelelane nathi ngengxoxo eneenkcukacha.
Q1. Loluphi uhlobo lwelaphu onokulwenza?
A: Singabonelela ngee-electrode ezahlukeneyo ze-welding, iimodeli eziphambili zi-AWS E6010, E6011, E6013, E7018, nge-welding yesinyithi, i-AWS E308-16, E308L-16, E309-16, E308L-16, E310-16, E312- I-16, i-E316-16, i-E316L-16 yentsimbi engenasici kwaye i-PLZ jonga iindidi zemveliso ngeenkcukacha ezithe kratya.
Umbuzo Yintoni ixesha lakho lokuhlawula?
Umbuzo. Yintoni ixesha lakho lokuhambisa?
A: FOB, CIF, Lwemipu
Umbuzo Njani malunga nexesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezingama-25 ukuya kuma-30 emva kokufumana intlawulo yakho kwangaphambili. Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Umbuzo 5. Ngaba uyayixhasa i-OEM / i-ODM?
A: Ewe, siyayixhasa i-OEM / i-ODM, kwaye sinokupakisha ngokokuyila kwakho.
A: Siyavuya ukubonelela ngesampulu yokujonga umgangatho kunye nenjongo yovavanyo. Isampulu ngaphakathi kwe-2kgs isimahla, ukuthuthwa kwempahla ngexabiso lakho.
Q8. Ungaqinisekisa njani ukuba ulawulo lwakho lomgangatho?
Sine-ISO9001: isiqinisekiso sika-2008, abahloli bekhwalithi yexesha elizeleyo, ilabhoratri yovavanyo lobuchule. Imveliso ihambelana ngokungqongqo nemigangatho yamazwe aphesheya.
Umbuzo 9. Njani malunga ukupakisha?
Ngokwesiqhelo kukho ii-5kgs ebhokisini, iibhokisi ezi-4 ebhokisini, ii-20kgs kwibhokisi nganye. 50carton kwipallet, 1ton ipallet nganye.
Umbuzo10. Ngaba ndwendwela umzi-mveliso wakho?
Sibamkela ngokufudumeleyo abahlobo abavela kwihlabathi lonke ukuba basityelele. Ngokuqinisekileyo uya kudibana nokubuk 'iindwendwe.
Egqithileyo I-Electrode ye-Weld ye-Weld e-Weld emincinci
Okulandelayo: I-Electrode ye-Weld ye-Weld e-Weld emincinci